Akka ragaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara 2017 irraa argametti baay’inni dargaggoota Adduunyaa keessa jiranii biiliyoona 1.2 oli. Akka ardii Afrikaattimmoo baay’inni dargaggootaa dhibbeentaa 60 ol akka ta’e himama. Akka biyya keenyaattis lakkoofsi dargaggootaa baay’ee danuudha. Humni kuni dhaloota hoo’aa, si’aawaafi kan misoomafi dagaagina biyyaatiif tumsa ol’aanaa gumaachuu danda’uudha. Humni kuni yoo akkaataa barbaachisuun faaydaarra hin oolin qisaasama guddaadha. Akka Oromiyaattis yoo ilaalle gaheen dargaggoon/ qeerroon keenya kallatii hundaan gumaachaa jiru baay’ee ol’aanaadha. Keessatuu yeroo ammaa kanatti dargaggoon keenya itti gaafatamummaa fudhachuudhaan dhimmoota murteessoo uummata keenyaa irratti gaheen inni taphachaa jiru baay’ee guddaadha.
Gahee dargaggoonni taphachaa jiran kana immoo hamma danda’ameen daran akka guddatu ( maximize) godhuun baay’ee barbaachisaadha. Bu’uurri hundeeffama OLItis dargaggoonni keenya ciminni isaanii daran akka dabaluuf carraa uumudha. OLIn hundeen waan hundaatuu ilaalcha keenya ta’uu isaa irraa madda. Dargaggeessi ilaalcha ( attitude) isaa dagaagsuu irratti cimee yoo hojjate, miira injifannootiin yoo guutame, rakkoo kamiyyuu bira dabree waan yaadu hunda dhugoomsuu akka danda’u yoo amane, kaayyoodhaan yoo masakame, kaayyoo lafa kaawwate galmaan gahuuf waan barbaachisu hunda yoo godhe ofiifis jireenya isaa jijjiiratee uummata isaatiifiis bu’aa guddaa buusuu ni danda’a.
OLIn dargaggoonni keenya xiinsammuun isaanii akka lelisu, leenjii hoggansaa akka argatan, muuxannoo jireenyaa namoota muuxannoo hedduu qaban irraa akka qoodatan akkasumas dhimma kamiyyuu irratti deeggarsa gorsaafi yaadaa akka argatan hojjata. Gabaabumatti kaayyoon ijoon OLI kanneen asii gadiiti;
A. Leenjii Gaggabaaboo dhimmoota Hoggansaa, Xiinsammuufi Jijjiirama dhuunfaa irratti xiyyeeffatan dargaggoota keenyaaf kennuu ( Providing Short Trainings on Leadership, Psychology and Personal Transformation);
B. Dargaggoonni keenya namoota muuxannoofi beekkumsa ol’aanaa qaban irraa akka fayyadamu danda’an haala mijeessuu ( facilitating a platform for experience sharing and mentorship);
C. Dargaggoonni keenya dhimmoota garagaraa kan guddina isaanii irratti xiyyeeffatu ilaalchisee deeggarsa yaadaafi gorsa akka argatan haala mijeessuu ( Providing Advisory Services on matters important to their development);
D. Dargaggoonni keenya carraalee barumsaa, leenjiifi kkf akka Adduunyaatti argaman irraa fayyadamaa akka ta’uuf odeeffannoo waqtaawaafi deeggarsa barbaachisu hunda godhuu ( delivering up to date informations on different opportunities for the youth);